माउ थाइ अर्थात् चिनियाँ कूटनीतिक मदिरा - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
माउ थाइ अर्थात् चिनियाँ कूटनीतिक मदिरा
पारिवारिक जमघट, व्यापारिक भेटवार्ता र बिदाहरुमा यो मदिराका साथ चिनियाँहरु मुड फ्रेस गर्छन्
लक्ष्मी लम्साल बेइजिङ २७ साउन
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा माउ थाइ लिँदै
सन् १९७२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन रिचार्डले चीन भ्रमणका दौरान चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँगै चेयर्स गरेपछि माउ थाइ रक्सी कूटनीति र मित्रताको प्रतीक बनेको छ। सन् २०१३मा चीनमा राष्ट्रपति सी जिन पिङ्गले पनि चीनको भ्रमणमा आएका बेला भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई माउ थाइ चखाएर पठाए। यसरी बितेका तीन दशकमा चीनको पाइच्यू अर्थात् माउ थाइले उत्कृष्ट गुणस्तर र अब्बल दर्जाको रक्सीको उपाधि पायो।
माउ थाइ चीनको एउटा प्रसिद्ध र साहसिक मदिरा हो। यसमा ५३ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा हुन्छ। अरु रक्सीभन्दा यसको स्वाद गहकिलो ठानिन्छ। मन्द मधुर स्वाद, सस जस्तो सुगन्धित। यसले आफ्नो कडापनसँगै चिनियाँहरुको बहादुरीपनलाई पनि इङ्गित गर्ने भएकाले चिनियाँहरु यो रक्सी पिउनु र पिलाउनुलाई गर्वको रुपमा लिन्छन्।
माउ थाइको वैभव सामान्यतया पारिवारिक जमघटको बेला, व्यापारिक भेटवार्ता र बिदाहरुमा यो मदिराका साथ चिनियाँहरु मुड फ्रेस गर्ने गर्छन्। अथवा कुनै विदेशी पाहुना आए भनेपनि उनीहरुको स्वागतार्थ चिनियाँहरुले यसलाई प्रयोग गर्दछन्। क्वीचौ प्रान्तको माउथाइमा यसको उत्पादन हुने भएकाले यसको नाम पनि माउ थाइ रक्सी रहन गयो। त्यहाँका स्थानीयले यस रक्सी उत्पादन गर्न अगुवाई गर्ने तु खाङ्गलाई यसका प्रणेताका रुपमा मान्छन्।
माउ थाइका आविष्कारक कथनी अनुसार तु खाङ्गले हिउँद ऋतुमा जुनेलो बिनलाई काठको खोक्रो भागमा जम्मा गर्ने गर्थे। पछि वर्षाले भरिएको ठूटोबाट सुमधुर वास्ना फैलिएको महसुस गरे। त्यसैबाट उनले रक्सी उत्पादनको प्रक्रिया विकास गरे जुन अचेल चीनमा प्रचलित ब्राण्ड पाइच्यू अर्थात् ह्वाइट स्पिरिटका रुपमा जीवन्त छ। दैनिक रुपमा २ दशमलव ७ मिलियन बोत्तल तथा ३०० भन्दा बढी प्रकारका रक्सी उत्पादन हुने गर्दछ।
स्थानीय सम्वृद्धिको पर्याय
अहिले क्वीचौ प्रान्त एउटा रक्सी व्यवसायको हव जस्तै हुन गएको छ। त्यहाँ रहेका १५७ वटा गाउँ जुनेलो उत्पादनका केन्द्र बनेका छन्। जुनेलोबाट माउ थाइ उत्पादन गरिन्छ। स्थानीय चिनियाँहरुका विचारमा माउथाइ चीन राष्ट्रको गर्व हो। किनकि उद्योग क्षेत्रले पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर उच्चस्तरीय प्रविधि र गुणस्तरलाई पनि कायम राखेको छ। उनीहरुका अनुसार स्थानीय अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भएको छ भने ७० हजार किसानलाई रोजगारी दिइएको छ। ७० देखि ८० प्रतिशत जनसंख्याको आम्दानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पाइच्यू उद्योगबाट आयातित छ।
माउ थाइ रक्सी कूटनीतिक मियो
माउ थाइ विगत केही दशकमा चिनियाँ राजनीतिको एउटा मियो बनेको छ। चिनियाँ नेताहरुले पनि यसको प्रवर्द्धनमा योगदान गरेका छन्। नयाँ चीनका संस्थापक माओत्सेतुङ्ग मात्रै नभएर चौ एनलाई लगायतले यसको उत्थानमा प्रोत्साहन गरेका गरेका थिए। सन् १९४९ मा चौले उथाइलाई राज्यभोजमा समावेश गरिने मुख्य रक्सीको रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए।
धेरै वर्ष अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री काकुई तानाका मात्रै नभएर हङ्गकङ्ग मामिलालाई लिएर साइनो-ब्रिटिस वार्ताका क्रममा तङ् स्याओ फिङ् र मार्गरेट थ्याचर लगायत नेताहरुले माउ थाइको चुस्की लगाए। चिनियाँ नेताहरुले अहिले निरन्तर रुपमा आफ्ना उच्चस्तरका विदेशी पाहुनाहरुलाई माउ थाइद्वारा नै स्वागत गर्ने गर्दछन्।
माउ थाइको सिमापार यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माउ थाइले प्रतिष्ठा कमाएको छ। यसको सञ्जाल एशियाबाट उत्तर अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियासम्म फैलिएको छ। अझै पनि माउ थाइको विश्वबजारको बाटोमा हरियो बत्ती प्रशस्त बलेको देखिन्छ। सन् २०१५ मा सान् फ्रान्सिस्कोमा आयोजित वर्ल्ड स्पिरिट्स कम्पिटिसनमा संसारकै उत्कृष्ट मदिराको रुपमा स्वर्णपदक जितेपछि क्वीचौको माउथाइ पहाडबाट मदिराको खोला अविरल बगिरहेछ।
नेपालको परिचायक रक्सी?
रक्सी भन्नेवित्तिकै नेपालीहरु, अझ हिन्दु बाहुल्य समाजमा नकारात्मक रुपमा लिइन्छ। त्यसमाथि आधा नेपालले त जीवनभर रक्सी छोएको पनि हुँदैन भनिन्छ। सामाजिक रुपमा रक्सी पिउनु र मात्रा मिलाएर पिउनुलाई संसारमा जहाँ पनि स्वीकारिन्छ। संभवतः केही नेपालीले यस्तो प्रश्नको सामना गरेको हुनुपर्छ कि नेपालीको परिचायक रक्सीको नाम के हो? अनि कुनै विदेशी नेता आउँदा नेपाली नेताहरुले स्वागत गर्ने मौलिक ब्राण्डेड रक्सी शायदै होला। रक्सीका लागि अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिन्छ तर रक्सी उत्पादनले नेपालको ब्राण्ड कहाँ कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने कुरा यकिन छैन।
सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रक्सी उद्योग खोलेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याएको छ। अचेल चीन आउने कुनै पनि विदेशीले माउ थाइ चाख्ने र स्वदेश फर्किँदा माउ थाइ चिनो लैजाने गरेका छन्। हामीले पनि नेपाली विशेषतायुक्त रक्सी खुट्याउनु जरुरी छ।
हाम्रोमा कुनै प्रतिष्ठित मानिसको बदनाम गर्नुपर्‍यो भने रक्सी पिउँदै गरेको फोटो प्रचार गरिन्छ तर गुणस्तरीय रक्सीले अन्तर्राष्ट्रिय नाम कमाउन पनि सक्छ भने समृद्धि र प्रतिष्ठा पनि फैलाउन सक्छ।
प्रकाशित २७ साउन २०७४, शुक्रबार | 2017-08-11 14:41:09
नेपालको सैन्य क्षेत्रमा सघाउने चिनियाँ इच्छा
चीनसँगकाे पारवहन प्राेटाेकलमा बेइजिङमा वार्ता
बेइजिङमा चिनियाँ मन तान्न सफल नेपाली थाङ्का कला
बेइजिङमा बौद्ध सम्मेलन, बुद्ध दर्शनको फैलावटबारे बिमर्श
स्तन क्यान्सरले जसलाई सेलिब्रिटी भनेन
नेपालको बाढी पहिरोमा सचेत रहन चिनियाँ पर्यटकलाई चेतावनी
बेइजिङमा केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग जोड्ने सम्झौता
सी र ओलीबीचको भेटवार्ताप्रति चिनियाँ परराष्ट्रको प्रतिक्रियाः पर्खनुस्
उपन्यासकी प्रमुख पात्र जलजला अर्थात् विद्या ढकालसँग सिंहको गहिरो प्रेम थियो। नेपालको वामपन्थी महिला आन्दोलनकी सशक्त नेत्री ढकालको २०३८ सालमा...
खोक्रा भाषण र नाराले सकेको देश हो मेरो
राजा वीरेन्द्रले मदन भण्डारीसँग सोधे— मेरो अनुभवमा नयाँ प्रधानमन्त्री अलिक जिद्दी स्वभावका छन्। तपाईंहरुको कुरा नमान्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने...
मदन भण्डारी र रामनाथ कोइरालाको घर खोलाको वारिपारि पर्थ्यो। मित–मित भेट्ने कुरा लाजको विषय हुन्थ्यो। साथीसंगीले ‘मितज्यू–मितज्यू भेट भए, घ्याम्पो...
प्रधानमन्त्री श्री चाउ एन लाइ नेपाल आउनु भएको बखतमा दुई मुलुकको बीच शान्ति र मैत्रीको सन्धिबारे छलफल र हस्ताक्षर गर्न दुबै पक्षले मञ्जुर गरे।
हाम्रो पालामा फुटबल होइन, भलिबल खेल्ने चलन थियो। उपेन्द्र देवकोटा भलिबल राम्रो खेल्ने। मैले सोचेँ, ‘उपेन्द्रले भलिबल खेल्छन् भने मैले पनि किन भलिबल...